Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Mamorona sy mivarotra Saribakoly Chucky sy Billy Mogwai vita tanana ny mpanakanto
by Trey Hilburn III Novambra 11, 2020
by Trey Hilburn III Novambra 11, 2020 19,720 hevitra
Tsy isan'andro fa misy Mogwai mangalatra ny fonao. Saingy, iray amin'ireo andro ireo androany. Mpanakanto Etsy iray dia niara-niasa tamina asa manerana an'izao tontolo izao Play Play Play, Saw ary Gremlins izany dia nahatonga antsika tsy hahita zavatra. Ny olantsika amin'izao fotoana izao dia ny mamantatra hoe iza amin'ireo dudes ireo no tokony hananantsika voalohany.
Mpanakanto Etsy, Oili Varpy dia mamorona saribakoly Mogwai vita tanana vita tanana vita amin'ny tanana izay namboarina tamim-pahazotoana ary namboarina mihitsy aza. Raha mijery ny sanganasany ianao, ankoatry ny volavolan'i Billy the Puppet sy Chucky dia manana olon-kafa marobe izy.
Ny sasany amin'izy ireo dia mandray anjara mahaliana ary maka sary an-tsaina Gremlin amin'ny endrika Mogwai. Izy koa dia manana fifangaroana mahafatifaty an'i Baby Yoda miaraka amina Mogwai. Misy iray aza ao izay manome antsika matotra Aahh !!! Biby goavambe tena izy vibes.
Ny tsirairay amin'izy ireo dia natao mba hanafarana ary samy maka farafahakeliny 10 herinandro vao vita ary avy eo halefa any ivelany. Ny fotoana voafetra amin'izany dia tsy ratsy mihitsy raha mijery ny kalitao tsy mampino izay horaisinao ianao.
Mahatalanjona daholo ireo. Ny fiheverana ny antsipirian'ny tsirairay amin'izy ireo dia miavaka. Niampy izay fa tsy nieritreritra aho hoe misy fiovan'ny Billy the Puppet izay mety ho ity drobz voaozona ity.
Ahoana ny hevitrao momba ny famoronana Mogwai an'i Oili Varpy? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra. Oh, ary raha miantsena miaraka aminy ianao dia lazao azy fa nandefa anao i iHorror! Hizaha ny fivarotana feno LOHATENY ETO.
Zahao ireo zoma mahafinaritra ireo ny entana faha-13 azonao vidiana ao amin'ny Etsy.